Shirkadda United Airlines oo ku xad-guudbtay Haweeney Muslimad ah – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Shirkadda United Airlines oo ku xad-guudbtay Haweeney Muslimad ah
Shirkadda Diyaaradaha ee United Airlines ayaa waxaa soo wajahayo in guud ahaan la qaadaco in la raaco Diyaaradaha Shirkaddaasi, kadib, markii ay qaab cunsuriyad ah kula kaceen Haweeney Muslimad ah oo ka mid ahayd Rakaabka ku duulla Diyaaradaha Shirkaddaasi.
Kumanaan qof ayaa codkooda ku biiriyey sida ay uga caraysan yihiin falkii lagula kacay Haweeney Muslimad ah oo lagu magacaabo Tahera Ahmed.
Haweenydan ayaa falkaasi u muuqday hayb-sooca lagula kacay xilli ay la socotay Diyaaradda Shirkadda United Airlines oo ku duulaysay joog dhan 30,000 oo cagood (ft), markii ay ka codsatay mid ka mid ah Gabdhaha shaqaalaha ka ah Waaxda Qaabilaadda ee Diyaaradda inay u keento sharaab.
Gabadhii shaqaalaha ahayd waxay u keentay sharaab furan, laakiinse, Tahera Ahmed wey diiday inay cabto sharaabka furan sababo dhinaca faya-qabka sharaabkaasi.
Mar kale ayey ka codsatay inay u keento Qasac Sharaab xiran, laakiinse waxay gabadhii shaqaalaha ku jawaabtay:- “Ma laguu keenayo Qasac Sharaab xiran, waayo qasaca waxaad u isticmaali kartaa hub ahaan.
Tahera Ahmed waxay dhacdadii ay kala kulantay Diyaaraddaasi ku soo bandhigtay barta ay ku leedahay Twitterka, waxayna sheegtay in nin ka mid ah Shaqaalaha qeybta Kabiinka Diyaaradda oo aysan magaciisa u sheegi karin sababo dhinaca ammaanka inuu u keenay nin dhinac fadhiyey Tahrera Ahmed qasac beer ah oo aan la furin (an unopened can of beer).
Ninka loo keenay qasaca xiran oo horey Tahera Ahmed ula dooday eyey inta ay qasaciisa fiirisay waxay ku tiri:- “Taasi micnaheeda waa inaadan adiga u isticmaali karin qasaca sidii hub oo kale”.
Nin iyada dhinaca fadhiyey inta uu si kulul u eegay ayuu ku yiri:- “Muslimadf yahay waxaad u baahan tahay in …..”.
Intay ku yiri: Maxay?” ayuu haddana sii raaciyey:- “ waxaad u isticmaali kartaa sidii hub oo kale, ee …”.
Twitterka Taheera Ahmed waxa qoraalkeeda la wadaagay Kumanaan qof oo u muujiyey inay qaadici doonaan diyaaradaha United Airlines inay ku duulaan.
Waxaa Turjumay: Ustaad Nuradin Abokor Ahmed.
Wafdi uu Hogaaminayo Ra’iisul Wasaaraha oo Gaaray Cadaado
Somalia: “We will not countenance anything less than a fair deal for Somalia”